Ny teny no tsy atao be… ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny teny no tsy atao be… !
Indro ny matoan-dahatsoratra efa norenesinao tao amin’ny RDB ny talata 6 oktobra ary hita ao anatin’i Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) gazety taratasy laharana 4188, alahady 10 oktobra.
« Ny teny no tsy atao be, ny mamerina azy no tsy laitra » hoy ny fahendren-drazana. Azo ampifandraisina koa izany amin’ny hoe «avadiho im-pito ny lela vao miteny » na koa hoe « teny maro tsy ilaozan’ota ». Manoloana ny fahalalahana maneho hevitra dia manjary tsy voahaja ny lafiny fahendren-drazana. Amin’ny tany demokratika manko, anisan’ny zo fototra ny fahafahana maneho hevitra, hany ka toa tsy maintsy miteny ny olona. Tsy azo tampenam-bava ny olona. Anisan’ny ahalalana ny firafitry ny tany demokratika ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra.
Ny manahirana indray anefa dia ny tsy fahaizana mandanjalanja ny « lanjan’ny teny avoaka » na ny « fiantraikan’ny teny ambara ». Toa miteny fe miteny fotsiny. Maneho hevitra fe maneho hevitra. Dia manjary soatoavina ny demokrasia fa tsy ilay kendren’ny demokrasia no voizina. Hany ka be ny « teniteny fahatany ». Manimba zavatra fa tsy manorina. Tsy mety « tonga nofo » fa teny mandalo sy manidina fotsiny.
Rehefa tsy mazava anefa ny zavatra dia arafitry ny teny, izany hoe, ny lanjany ara-piarahamonina, ara-politika sy ara-kolontsaina, dia manjary sabatra marani-daniroa ny teny. Fa eo amin’ny sehatry ny politika indrindra no manjary very hasina ny teny satria feno lainga sy fitaka. « Ny lainga anefa toy ny salaka, ka ny tompony ihany no afatony ». Zary tsy manorin-javatra tato ho ato ny teny maro tsy mahamora harena. Zary teniteny foana no be. Hany ka fiarahamonina feno lainga sy fitaka no miorina. Dia mazava loatra fa feno olona afatotry ny salakany.
Raha tiantsika ny handroso, dia mila diovina ny teny. Mila ahitsy ny resaka. Mila vahana ireo salaka mamatotra an-dRainilainga mianakavy. Raha avelantsika hanjaka manko ny lainga, dia very hasina ny teny sy ny fifandraisan’ny mpiara-belona. Kolontsaina vaovao hafahafa no manjaka satria tsy mitana ny teny nomena ny olona. Mora mivadi-belirano ny olona. Hadinontsika fa ny Ntaolo mandala fihavanana dia fatorany amin’ny teny ny fanekem-pihavanana. Ho an’ny Jody, araka ny Testamenta taloha, dia nanjary lalàna ny teny fifanekena. Mila kolontsaina mazava sy matanjaka, araka izany, ny politika eto amintsika. Mila mazava ny firehana demokratika mba ho kolontsaina hamelona ny fanehoan-kevitra. Mila olona marina sy mahitsy ny fiarahamonintsika fa tsy olona voagejan’ny salaka toa an-dRainilainga ka tsy afaka miova ary tsy afaka manova.
Ny lainga no fototry ny ratsy rehetra, ary satana no raiben’ny lainga. Mila diovina araka izany ny firenena tsy hanjakan’ny lainga sy ny teny mamitaka.